Barnaamijyada Bulshada - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Maaraynta Caafimaadka > Barnaamijyada Bulshada
Kooxda Barnaamijyada Beesha waxay halkan u joogaan inay kugula xiriiraan ilaha deegaanka ee kaa taageera caafimaadkaaga oo dhan.
Sheekadaada caafimaad ayaa ka badan xafiiska dhakhtarka
Caafimaadkaagu wuxuu qaabeeysan yahay meelaha aad waqtigaaga intiisa badan ku qaadato - guriga, goobta shaqada, dugsiga — waxayna kuxirantahay ilaha aad ka heli karto, sida:
Cunnooyinka caafimaadka qaba
gaadiidka lagu kalsoon yahay
Helitaanka daryeelka carruurta
Si wax ku ool ah loogu maareeyo xaaladahaaga caafimaad loona ilaaliyo qaab nololeed caafimaad leh, waxaa laga yaabaa inaad u baahato helitaanka ilahaan aasaasiga ah.
Sidee CHPW kaaga caawin kartaa inaad buuxiso baahiyaha muhiimka ah
Kooxda Barnaamijyada Beesha waxay kugu xirayaan barnaamijyo iyo adeegyo ka jira bulshadaada si ay kaaga caawiyaan baahiyahaaga maalin kasta.
Kooxdayadu waxay ka kooban yihiin khabiiro ku takhasusay guryaha, fayoobaanta iyo soo kabashada, caafimaadka guud, iyo adeegyada ku saleysan bulshada. Waxay kaa taageerayaan hagaajinta caafimaadkaaga iyo ladnaantaada. Haddii aad u baahan tahay gargaar oo aadan hubin halka aad u jeceshahay, ka wac kooxda barnaamijyada bulshada 1-866-418-7006.
Wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku noolaato nolol maalmeedkaaga waxaa loo tiriyaa baahi aasaasi ah. Baahiyaha aasaasiga ah waxaa ka mid noqon kara cuntada, dharka, waxyaabaha daryeelka shakhsi ahaaneed, iyo yutiilitida. Haddii aad dhibaato ku qabtid sidii loo dabooli lahaa baahiyahaaga aasaasiga ah, kooxda Barnaamijyada Beesha ayaa kugu xiri kara hay'adaha bulshadaada ka mid ah sida bangiyada cuntada ama hoyga.
Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa codsiyada iyo dabagalka. Tusaale ahaan, aan dhahno waxaad wacdaa CHPW maxaa yeelay waxaa kugu adkaanaya bixinta cuntada:
Qof shaqaale ah ayaa kaa caawin kara sidii aad u codsan lahayd barnaamijka Caawinta Nafaqada ee Dheeraadka ah ee federaalka (SNAP).
Waxay sidoo kale la socon karaan horumarka dalabka.
Foomamka iyo waraaqaha waxay noqon karaan kuwo jahwareer iyo jahwareer leh, iyo ogaanshaha inuu qof kula joogo howsha waxay sahli kartaa arrimaha.
CHPW waxay ka caawisaa xubnaheena helitaanka nabadgalyo, gaadiid la isku halleyn karo oo ka yimaada kana yimaada ballamada caafimaadka. Waxaan ku xireynaa xubnaha adeegyada gaadiidka ee deegaankaaga, xitaa waan kuu diyaarin karnaa raacitaanno adiga kugu habboon. Baro wax badan oo ku saabsan raacitaanka bilaashka ah ee ballamaha caafimaadka.
Haddii aad u baahan tahay gaadiid sababo kale oo aan ka ahayn ballantaada caafimaad, waxaan kugula xiriiri karnaa foojarrada gaadiidka iyo adeegyada kale. Waxaan ku taageeri karnaa qiimaha safarkaaga dadweynaha ama lacagta gaaska, waxaanan bixin karnaa adeegyo kale oo kaa caawinaya inaad si jaban u safarto jadwalkaaga.
Waxaan u fidinaa taageero kuwa soo food saaray dhibaato xagga guryaha ah ama ka walaacsan xaaladooda guriyadeed. Raadinta guryo la awoodi karo way dhib badan tahay, waxaanan halkan u nimid inaan kaala hadalno xulashooyinkaaga, oo ay ka mid noqon karaan:
Guryaha deg-degga ah
Guryaha danyarta ah
Guryaha ku meel gaarka ah
Guryaha waayeelka ah
Waxaan kaa caawin karnaa codsi kasta oo guriyeyn ah oo aad u baahan karto inaad buuxiso, oo ay ku jiraan codsiyada Qaybta 8 iyo wicitaanada la socoshada. Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa inaad heshid ilo kaa caawinaya kirada, bixinta yutiilitida, dayactirka, iyo hoyga gurigaaga (tusaale: qabashada baararka rakibidda).
Haddii aad halis ugu jirto in guriga lagaa saaro, waxaanu kugu xidhi karnaa agabka ka hortagga raritaanka waxaanan kaa caawin karnaa ka jawaabida su'aalahaaga.